"Beenyaa dolaara miiliyoona 400 " warra warqii qotaniif - BBC News Afaan Oromoo
Afriikaan Kibbaa biyya albuuda warqeetiin arjoomamteedha. Haa ta'u malee arjoomni warqee biyyattii jireenya dukkanaa gurraachoota Afriikaatiin osoo hin haguugamiin hin hafu.
Hojjattooni lafa warqeen qotamu hojjetan waggootaaf yoo rakkoon fayyaa cimaan isaan mudatu, jireenyi saanii balaaf saaxilamu fi dhukkuba hin fayyineen yoo dararaman, kubbaaniyoonni warqii gurra osoo hin kenniineef turaniiru.
Tibbana garuu buqqeen bule dhagaa cabsa akkuma jedhamu san murtiin manni seeraa dabarse gammachu fideera. Murtichis kubbaaniyoonni akka beenyaa kanfalaniif kan dirqisiisuudha.
Afriikaa Kibbaatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hojjattoonni humnaa warqii qoturratti hirmaatan dhiibee sombaa balaafamaaf saaxilamaa turaniiru.
Dhukkubni sombaa 'Silikosiis' jedhamu kunis dhukkuboota hin fayyine keessatti ramadama. Dhukkubichis dhukkee dhagaawwan warqii irraa karaa funyaanitiin ol seenuun kan dhufuudha.
Murteen seeraa kunis dhukkubsattoonni kunneeniifi maatiiwwan warra du'aniif beenyaa akka kanfalamuuf dirqisiisa. Murteen kunis kan waggoota 40 darban fudhateefi mormii dheeraa booda waan ta'eef qalbii namoota hedduu hawwateera.
Himannaa walfakkattaa mana murtii kana booda banamuuf adeemsa mana murtii ariifataa qabaachuuf sababa ni ta'a jedhamee yaadama.
Kubbaaniyoonni gurguddoonni omisha warqii irratti hirmaataa jiran beenyaa raandii Afriikaa Kibbaa biiliyoona shanii kanfaluuf waliigalan shanidha.
Kunis doolaaraan yoo shalagamu dolaara miiliyoona dhibba afur ni gaha. Kanneen beenyaan kanfalamuufis hojjattoota humnaa kuma 10niin lakkaa'amaniifi.
Murteen mana murtii baroota dheeraa fudhate kunis osoo hojiirra hin olfamiin duras mana murtii waliigalaa biyyattiin raggaasifamu qabaata.
Hojjattoonni balaa fayyaa baayyee rakkissaa ta'eef saaxilamaniif beenyaa kanfaluu kubbaniyoota walii galan keessaayis Harmanii Goold, Gooldi Filidis, Afrikaa Renbo Miniraa, Siibaanii Istiil Waatar fi Angloo Ameerikaa keessatti argamu.